Ihe ize ndụ dị na SEO na otu esi emejuputa atumatu na-enweghị ntụpọ | Martech Zone
Fraịde, Machị 22, 2013 Fraịde, Machị 22, 2013 Douglas Karr
Nyaahụ anyị nwere nnukwu ogbako mpaghara nke a haziri Revenue North. Isiokwu ndị ahụ gafere azụmaahịa, teknụzụ na ahịa wee mepee ụbọchị na mkparịta ụka gbasara ihe egwu SEO.
Ọtụtụ agbanweela na ụlọ ọrụ njikarịcha njin ọchụchọ. Otu n’ime ndị bịara m mechara jiri m mee ihe ọchị na m nwere ndụmọdụ dị iche iche naanị afọ ole na ole gara aga. Ekwetaghị m. Agbanwewo m echiche m banyere otu esi etinye SEO na ihe nlebara anya na atụmatụ ahụ.
The SEO nsogbu bụ nsogbu mgbakọ na mwepụ. Search bụ nsogbu ndị mmadụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ SEO na-abịakwute okwu a site na ntụziaka na-ezighi ezi. Kama ịlele olu ọchụchọ na ogo, ha kwesịrị ịdị na-elegharị anya na ntụgharị gị, otu ndị ọbịa ahụ si aga ebe ahụ, wee lụọ ma ị ga-emeziwanye usoro ka ị ga-esi gbakwunye okporo ụzọ.
Na mpụga nghọta ebe na otu ndị ahịa gị si erute, isi ihe ga - eme ka njikarịcha njikarịcha nyocha dị mfe - Mee Ihe Google Kwuru. Ọ dị ezigbo mfe - Google nwere nnukwu Nduzi SEO na ha na-ebipụta, yana a Ntuziaka SEO 1-peeji nke SEO.
Ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu, ndi mmadu ka ha choro. Social emeela ka ọ pụta ìhè ugbu a, agbanyeghị, ọ na-akwado ma na-enye nsonaazụ ọchụchọ engine. Ọbụghị naanị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-agbakwu mbak (nke na-ejikọ njikọ… nke na-agba ogo ogo), Google nwere n'ezie gara agha na blackhat si eme. Ngalaba na - esote nke a, n'ezie, ga - awakpo mmemme ịkwụ ụgwọ na - ewepụta ọdịnaya mgbasa ozi.
Full gburugburu… nnukwu njikarịcha njin ọchụchọ na-anọ n'ubu nke nnukwu ahịa ahụ ọzọ na onye ndụmọdụ SEO. Mepụta ọdịnaya dị mkpa, dị oke egwu nke nwere ike ịkekọrịta n'ụzọ dị mfe ga-eme ngwangwa ma bulie akara gị. Mgbe nke ahụ mere, ọkwa gị ga-eso!
Tags: google +search engine njikarịchaChọọ MarketingAatụmatụ seo
Douglas dị ukwuu - yup Abụ m onye na-agụ ọsọ. Hụ n'anya dị ọcha ma dị mfe ọgụgụ, yana ịmịkọrọ mmiri. Iche echiche inyefe ndị ahịa ole na ole (ihe ngosi gị)
Daalụ nke ukwuu @prosperitygal: disqus!
Nke ahụ bụ otu iwu na-arụ ọrụ, Douglas. Ee, anyi nwere ike gbalịa ime ọtụtụ ihe iji meziwanye ọnụọgụ ọchụchọ SEO anyị yana ikike anyị nwere ịre ahịa ahịa dị mma, mana ọ bụrụhaala na ị na-agbaso ihe Google kwuru, mgbe ahụ ị ga-adị mma.